टोपबहादुर रायमाझी लाई खुलापत्र ! | Hindu Khabar
टोपबहादुर रायमाझी लाई खुलापत्र !
महाेदय, आज अलि कति लाेक लाई लाज लागेकाे छ ; तपाईका तर्क सुनेर ! तपाईवाट म जस्ता युवाले गर्व गर्ने स्वर्णिम सुन्दर स्वर सुन्न खाेजेका थियाै तर तपाईमा “ म” भित्रकाे अंहकार ले गिजाेलिरहेकाे रहेछ ।तपाई मा अझ मैले सबै गरेकाे हुँ भन्ने आत्मरती मा रमाउन खाेजिरहनु भएकाे छ ।त्याे पटक्कै सुहाएन लाेडसेडिग मैले गरेकाे हुँ ।
कुलमान लाई मैले ल्याएकाे हुँ भनेर आदी इत्यादी कुरामा तपाई काे वहस र तर्क चलिरहेकाे छ । भाेली कसैले कुलमान लाई मैले वसमा चडाएकाे थिए । लाेडसेडिग गर्न मेराे पनि भुमिका छ भन्दै भाेली कसैले भन्ला यि यस्तै खाले अर्थहिन गफ ले कुनै अर्थ राख्ला …? वहस के मा गर्नु भयाे के आवस्यक थियाे ? पटक्कै थिएन ; यस्ता नाैटंकी वन्द गरिनु पर्छ । अर्घाखाँची जिल्ला कै श्रध्देय स्वर्गिय काशीनाथ गाैतम यातायात मन्त्रि हुदाँ शुरू गरेकाे सालझण्डी तिनगिरे वाटाे काे स्वरूप वदलिएर शुरू भएकाे ढाेरपाटन सडकमा टाेप वहादुर काे याेगदान छ भनेर मानिस गाइगुई कुरा गरिरहेकै थिए । वाटाेकाे कारण घर खेत र दुई छाक खान वाट धेरै काे विचल्लि भए पनि सम्झना गरिरहेकै थिए तर आज अस्वाभिक रूपमा मन्त्रि पदमा विराजमान हुदाँ वित्तिकै सगरमाथा कै चुचुराेमा पुगे झै लाग्नु र अझ म बाेले कै सव थाेक ठिक हाे भन्न थाल्नु भयाे भने त्याे त्यति जिवन्त हुने छैन ।
माननिय मन्त्रि महाेदय, अरूले गरेका राम्रा काम मैले गरेकाे भनेर हानथाप गर्नु काे सट्टा नयाँ याेजना ल्याउनुस । जुन तपाई काे जिवन पछि पनि जिवन्त वनाेस ।मानिस ले श्रध्दा का पुष्पहरू चढाउन काे लागि उत्साहित हुने अवसर वनाेस र अझ मानिसमा गर्व काे महसुस हाेस । तपाई त्यस्ताे राजनेता हुने कि असफल शासक हुने ; त्याे आज गर्ने कर्म वाट भविष्य काे सूर्याेदय हुने छ । विकास काे परिभाषा नै वदलिदिनुस ! यातायात काे रूपमा निर्माण भएका सडक वाटाे काे वरीपरि फलफुल लटरम्म हुने किसिम ले वृक्षाराेपण गरेर सडक वाटाे वनाउदा .. निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा वाेटविरूवा लगाउने नीति नियम सगै कार्यन्यन हुने संयन्त्र वन्याे भने अमुल्य मानविय जिवन वच्न सक्छ । अकालमा मृत्युवरण गर्न विवस अवस्था राेकिने थियाे । भाेली का देशका कर्णधार वालवालिका हुन । उनीहरू पढने सरकारी विद्यालयहरू लाई उच्चकाेटी काे शिक्षा दिने संमयन्त्र निर्माण गर्नुस । यदि इच्छाशक्ति छ भने त्यसकाे लागि आधार के हुन र कसरी गर्न सकिन्छ !?! साेच्नुस साथै राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय वहस गरेर निश्कर्ष निकाल्नुस । जस्काे कारण मानिसमा आशा काे संन्चार हुन सकाेस विश्वास काे भरपर्दाे आधार वनाेस । त्यसपछि निर्माण हुने छ समाज काे उज्यालाे अनुहार । तर तपाई लाेडसेडिग मैले गरेकाे भनेर जाडाेमा ताताे ताप्नु खाेजिरहनु भएकाे छ ।
गफ र हल्ला ले मानिस लाई प्रभाव पार्ने याे युग हाेइन ; बाेल्न नसकाेस आँखा ले देख्न नसकाेस कानले सुन्न नसकाेस तर काम निष्ठा पूर्वक गर्छ भने त्यस्ता मानिस लाई मानिस ले खाेजि खाेजि पुजिरहन्छन । म भगवान हुँ मलाई पुज्नु पर्छ भन्नु काे गर्जन संग मानिस काे सम्वन्ध र सराेकार छैन । चर्काे वाेल्नु हाेला विराेधमा सास काडने लाई चडकन हान्नु हाेला । त्यसले मानिस काे मन भित्र पस्न सकिदैन । याे देश ले तपाई लाई मन्त्रि पदमा पाएकाे छ । यदि कुनै सार्थक परिणाम प्राप्त भएन भने त्यसले खासै अर्थ राख्ने छैन ! अहिले तपाई काे एक दिन पनि महत्वपूर्ण छ ; त्यसलाई तपाई कसरी प्रयाेग गर्नु भएकाे छ । त्याे तपाई ले आफ्नै अन्तरमन वाट आफै ले विश्लेषण गर्नुस ! तपाई फुल माला मै अझ वरीपरि काे स्वस्तीगान मै आरती गर्ने कै रमझम मै रमाइरहने हाे भने त्यसकाे सावधिक गुणात्मक अर्थ रहने छैन ।अझ घृर्णामा रूपान्तरण हुने छ। माननिय मन्त्रि महाेदय, आज तपाई ले राम्राे काम गर्नु भयाे भने विश्वभर वाट नै तपाई काे मुक्त कण्ठले प्रसंसा हुनेछ। आज काे युग विज्ञान र प्रविधि ले निकै साँगुरिएकाे छ ।
तपाई भ्रम लाई ढाक्ने तिर नलाग्नुस । एउटा यस्ताे व्यक्ति वनिदिनुस; जस्ले गर्दा अर्घाखाँची काे माटाे कै मानिस ले श्रध्दा र सम्मान गर्ने छन । छट्टु र चातुर्यता ले क्षणिक सफलता जस्ताे देखिए पनि मानिस काे मन वाट घृर्णा पैदा हुने छ ।राेजाई तपाई काे हाे …१ जित्ने हार्ने सफलता असफलता भन्दा पनि असल काम के हाे ? निष्ठा का निर्देशक सिध्दान्तहरू के हुन त्याे तपाई काे विवेक ले दिन सकाेस । आज काे वकवास र अर्थहिन गनगनमा मुल्यवान समय लाई काैडीकाे मुल्यमा खेर नफाल्नुस ।राजनेता काे परिभाषा मै वदलिदिनुस । विकासकाे स्वरूप नै यस्ताे चमत्कार पूर्ण गरिदिनुस । जस्ले गर्दा मानिसमा उर्जा भरिनेछ ।
प्रधानमन्त्रि केपि आेलीका वकवास कुराले दिने मनाेरन्जन क्षणिक रूपमा रमाइलाे हाेला तर देश समृध्दि हुदैन र भएन। प्रचण्डकाे परिवार प्रेमि राजनीति ले पनि देश वनेन । माधव नेपाल झलनाथका गनगन वाट पनि मानिस मा उर्जा छैन यद्यपी तपाई निरासा र असफल झुण्ड वाट चम्किलाे वन्न सक्ने धेरै अवसर छन ; त्यसकाे लागि काम चाहिन्छ ।
काम मानिस काे जिवनमा सुधार हुने जिवनस्तर वृध्दि हुने किसिम काे हुनु जरूरी छ । केहि कार्यकर्ता लाई जागिर मिलाई दिने प्रलाेभन मा वरीपरि राख्नु काे मजा मै रमाउने हाे भने तपाई काे घर रंगिएला खाट काे वरीपरी सुन कै जलप भरिएला तर देश ले केहि पाउने छैन । हुनत: तपाई का प्रारम्भिक अभिव्यक्ति नै निरासा का बादल वाट झुल्किएका छन । अंहकार काे गर्जनमा उर्लिएकाे मेग ले कति वर्षा गर्ला … भूमिगत काल काे माआेवादी धम्किवाट हुर्किएकाे राजनीतिमा विनयशिलता काे व्यापक र विशाल चाैपारी विना समाज काे रंग सुन्दर सक्ने छैन । अवसर लाई स्वार्थमा रूपान्तरण गर्ने कि सृजना मा परिणत गर्ने त्याे कर्म वाट रूपान्तरण हुने छ । यति सुन्दर देश लाई विकासमा सिगार्ने हाे भने नेपाल एक दिनमै पूर्व पश्चिम घुम्न सकिन्छ तर त्यसकाे लागि क्षमता याेग्य कर्मशीलता चाहिन्छ ।
यदि तपाई मा त्याे हिम्मत शाहस छ भने ; तपाई काे काम गर्ने टिममा सय जना कुलमानहरू जन्माउने तागत देखाउनुस …एउटा कुलमान काे अपमान नगर्नुस … देखाउनुस याे देश वदल्ने शाहस वुध्दि र विवेक निकाल्नुस । अव त तपाई काे कपाल काे रंग पनि सेताेमा रूपान्तरण भैइसकेछ । क्रमिक रूपले युवावस्था काे जाेश र जागर विस्तारै कमजाेर हुदै जान्छ। अव याे अवसर लाई अर्थहिन वकवास तिर लाने काम वन्द गर्नुस । काम गर्नुस ; काम । केपि आेली काे सती जाने लालचा भन्दा समाज काे आवस्यकता के हाे त्याे रातदिन नसुतेर याेजना वनाएर चमत्कार गर्नुस । अनी हुने छ ; दश वर्षें युध्द काे पिडा वाट पनि एउटा असल सपुत जन्मिए छ देशमा …भन्ने आशा झुल्किने छ । अन्यथा जनता काे अझ युवा काे आँशु काे श्राप ले तपाईहरू पाेलिरहने छ । (लेखकः पाणिनी-४ पटौटी घर भई हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ ।)